विवाहको सात दिन नपुग्दै बेपत्ता वेहुला झुण्डीएको अवस्थामा फेलापछि घटना झन् रहस्यमय (भिडियो सहित) « Sajha Page
विवाहको सात दिन नपुग्दै बेपत्ता वेहुला झुण्डीएको अवस्थामा फेलापछि घटना झन् रहस्यमय (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: November 9, 2017
गुल्मी, २३ कार्तिक । अर्घाखाँचीमा शिक्षक वेपत्ता भएको एक महिना हुँदै गर्दा त्यहाँका् प्रहरीले एक जना ब्यक्ती झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको छ भनेर सुचना प्रवाह गरे पछि घटना थप रहस्यमय बनेको छ । प्रहरीले दिएको सुचनाको आधारमा शव चिन्नै नसक्ने अवस्थामा रहेको छ । असो्ज १६ गते मागी विवाह गरी असोज २२ गते आइतबार दिउसो १२स्३० ( ०१ बजे देखि सन्धिखर्कबाट बेपत्ता भएका पाणिनी गाउँ पालिका वार्ड नं ५ साविक मैदान ५ धारापानीका हरिप्रसाद भट्टराईको शव हुन सक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ ।
साथमा एक मोबाईल फेला परेको छ । मोबाईलको नम्बर ९८४७३०६९४५ रहेको छ । झुन्डिएको ठाउँमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैकमा जम्मा गरेका स्लिप र जुत्ता( कपडा समेत फेला परेका छन् । घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीको एक टोली घटनास्थलतर्फ गएको थियो । मृतकका आफन्त अझै आईपुगेका छैनन् । आफन्त आएपछि मात्र मृतकको शव परीक्षणका लागि जिल्ला अस्पताल सन्धिखर्कमा लगिने प्रहरीले बताएको छ । आफन्त नआएसम्म प्रहरीले जंगलमा नै शव कुरेर बस्ने छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवत्ता प्रदिपकुमार बिसीका अनुसार उक्त शव परिवारले दिएका हुलियाका आधारमा उनैक हुन सक्छ । उनले भने त्यस आधारमा परिवारका सदस्यलाई वोलाईएको छ भोली सम्म थाह हुन्छ । हामी संग परिवारका सवै सदस्यको मोवाईल नम्वर रहेको छ । सवै संग सम्पर्क राख्दा सवैको फोन सम्पर्क विहिन छ ।
स्थानियबासीले दाउरा( घास काट्न जंगलमा गएको बेला झुन्डिएको अबस्थामा शब देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । यसअघि प्रहरी सेनाले उक्त जंगल क्षेत्रमा खोज तलास गरेपनि फेला परेका थिएनन् ।
बेपत्ता भएको दिन बिबाहको व्यवहार मिलाउन राष्ट्रिय बाणिज्य बैक सन्धिखर्कमा आई एटिएमबाट ५० हजार निकाली उनले आफुसंगै आएका साथी लक्ष्मण सुनारलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरि एशियन लाइफ इन्स्योरेन्समा गएर किस्ता भुक्तानी समेत गरेका थिए । नव दुलही दुलहा वेपत्ता भए देखि नै वेला वेलामा अचेत हुँदै आएकी छन् । यस घटनालाई रहस्यमय रुपमा लिईएको छ । नव दुलही गत स्थानिय तहको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा भर्ना भएर पणेनी गाउँपालिकामा त्यस टिमको कमाण्डर तोकेर प्रहरीले पठाएको थियो ।
विवाह लगत्तै बेहुला बेपत्ता, घटना रहस्यमय (फोटो सहित)
प्रेम सुनार,गुल्मी, असोज–२८ । अर्घाखाँचीको पँडेनी गाउँपालिकामा विवाह भएको एक साता नवित्दै बेहुला बेपत्ता भएका छन् । पाणेनी गाउँपालिका वडा नम्वर ५ मैदान धारापानी टोलका ३० वर्षिय बेहुला हरिप्रसाद भट्टराई असोज २२ गते दिउँसो सन्धीखर्कबाटै बेपत्ता भएका हुन् ।
उनले सोही गाउँपालिका वडा नम्वर–४ पटौटीकी २१ व्र्षिया विष्णु घिमिरे संग असोज १६ गते दशै टिकाको तेश्रो दिन विवाह गरेका थिए । जिल्लाका विभिन्न विद्यालय हुँदै पछिल्लो चरण निमावि तह गाणित विषयका स्थाई शिक्षकका रुपमा भट्टराई नवलपरासीको डेढ मावि डेढगाउँमा कार्यरत थिए । उनि त्यस विद्यालयमा पनि नपुगेको विद्यालयले जानकारी दिएको छ ।
आज यतिका दिन वित्दा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीले खोजतलास र अनुसन्धान फितलो गराएको उनका दाजु रेणुकान्त भट्टराईले गुनासो गरे । ‘हामीले खोजतलासका लागि त्यस कार्यालयमा उजुरी दिएको पनि यतिका दिन भई सक्यो’–भट्टराईले भने–‘ प्रहरीले फेला पार्न नसक्नुले अनुसन्धान फितलो भएको अनुभुत गरेका छौं । ’
यस सम्वन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख डिएसपी एकनारायण कोईराला संग सम्पर्क राख्दा उनले मातहतका सम्पुर्ण ईकाईका प्रहरीहरु व्यापक रुपमा परिचालित गर्दा पनि फेला पार्न नसकेको प्रतिकृया दिए । उनले उनको कल डिटेलबाट पनि अनुसन्धान भई रहेको बताए ।
वेपत्ता भट्टराईका दाजुका अनुसार त्यस दिन दिउँसो १२ वजे र ३ मिनेटको समयमा सन्धीखर्कको एशियन लाईफ ईन्सुरेन्स कम्पनीमा किस्ता वुझाउन उनि पुगेको सिसीटिभिमा समेत देखा परेका छन् । किस्ता तिरी सकेपछि रशिद लिन पछि आउँछु भनेर त्यहाँबाट वाहिरिएका छन् ।
विवाहको दिन तस्वीरमा उनै बेहुला बेहुली
त्यहाँबाट अलि माथी सम्म हिडिरहेको उनका छिमेकीले पनि देखेका छन् । त्यस अघि उनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सन्धीखर्कबाट ५० हजार निकालेर उनै सुनारलाई बुझाएका छन् ।
सुनारले उक्त रकम बुझेको र करिव १ वजेतिर घर फर्कियौं भनेर फोन गर्दा स्वीचअफ भएको पाए पछि परिवारजनलाई खवर गरेको बताईएको छ । सुनार घर फर्किएका छन र उनको पसल उनकै छिमेक मैदानमा रहेको छ ।
उनकी वेहुली विष्णु घिमिरेका अनुसार त्यस दिन १० वजेर ४० मिनेट जाँदा उनले श्रीमानलाई फोन गरेकी थिईन् । मैले फोन गरें, उहाँले उठाउनु भयो र अहिले बाटैमा छु, सन्धिखर्क गएर मैले गर्छु फोन भन्नु भएको थियो , त्यस पछि हाम्रो फोन हुन सकेन’– घिमिरेले भनिन्–‘ आफुहरु विच विवाहको दिन देखि निकै सुमधुर सम्वन्ध थियो ।’
के भन्नु हुन्थ्यो उहाँले ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्–‘तिहारको भाई टिका सम्म नवलपरासी विद्यालयमा जान्न । टिकाको अर्का दिन कार्तिक ५ गते तिमीलाई लिएर जान्छु र उतै बसौंला भन्नु भएको थियो ’उनले थपिन मैले त केहि अनुमान र्नै गर्न सकेकी छैन् ।’
यस घटनालाई परिवारका सदस्यहरुले निकै रहस्यम रुपमा लिएका छन् । केहि अनुमान नै गर्न नसकिएको परिवारको सवै सदस्यहरुको भनाई छ । उनका आमा वुवा र भाई वहिनीहरुमा रुवावासी छ । नव दुलही विच एक महिना अघि देखि चिनजान भएको थियो ।
विष्णुल भनिन्–‘एक महिना अघि मात्र उहाँ संग चिनजान भएको थियो , त्यस अघि मैले उहाँलाई देखेको पनि थिईन् अँस्ती आफन्तले मागेर विवाह भएको हो । ’ स्नातक सम्म अध्यान गरेकी घिमिरे स्थानिय तहको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा भर्ति समेत भईकी थिईन् ।
बेपत्ता शिक्षक भट्टराईलाई कुनै विमार नभएको , साथमा पैसा पनि धेरै नभएको र कसै संग दुश्मनी पनि नरहेको उनका दाजुले बताए । परिवारमा आसंकको अर्को पाटो कसैले अपहरण ग¥यो कि ? भन्ने छ ।
परिवारजनले खोज तलासका लागि सवै सञ्चार माध्यम , प्रहरी प्रशासन र आम नागरिक संग अपिल गरेका छन् । नव दुलही घिमिरे तनाव ग्रस्त हुँदै आज माईती घर पुगेकी छिन् ।
विवाहको ३ दिनमा बेहुला बेपत्ता – नवदुलही फोनमा यसरी रोइन
प्रेम सुनार,गुल्मी, असोज –३० । अर्घाखाँचीको पणेनी गाउँपालिकामा विवाहको एक हप्ता नवित्दै बेपत्ता भएका छोराको प्रहरी प्रशासनले हाल सम्म खोज तलासमा ढिलाई गरे पछि तड्पीएर बसेका बाबु आमाले चिना हेराउने पण्डित देखि धामी झाँक्रि गराएर मन बुझाई रहेका छन् । पाणेनी गाउँपालिका वडा नम्वर ५ मैदान धारापानी टोलका ३० वर्षिय बेहुला हरिप्रसाद भट्टराई असोज २२ गते दिउँसो सन्धीखर्कबाट बेपत्ता भएका हुन् ।
उनले सोही गाउँपालिका वडा नम्वर–४ पटौटीकी २१ बर्षिया विष्णु घिमिरेसंग असोज १६ गते दशै टिकाको तेश्रो दिन विवाह गरेका थिए । श्रीमान बेपत्ता भएको पिडा खेप्न नसकेर विरामी भएकी नवदुलही आज नवौं दिनको दिन सन्धीखर्कस्थित जिल्ला अस्पतालमा भर्ना भएकी छन् । अस्पतालको शैयामा गलाअवरुद्ध पार्दै लौनौ मेरो उहाँलाई खोजि दिनुस भन्दै उनले ढाको छाडिन् । ‘उहाँ वेपत्ता भएका दिन देखि मेरो मुखमा पानी शिवाय अरु केहि परेको छैन् , उहाँको फोन आउँछ कि त उहाँ नै टुप्लुक्क कति वेला आई पुग्नु हुन्छ कि भन्ने झल्को लाग्छ तर खै कुन्नी उहाँ किन आउनु हुन्न । विवाह भएको चार पाँच दिनमै मैले यो अवस्था भोग्नु प¥यो, उनले ’ भनिन –‘मैले जस्तो अरु कसैले भोग्न नपरोस् ।’
वेहुला बेपत्ता पछि वियोगको पिडा थेक्न नसकेर अस्पतामाको शैयामा नवदुलहीै
यता उनका आमा वावुले गाउँमा हेराउने मान्छे कुनै खाली गरेका छ्रैनन् । हराउने भट्टराईका रुमकान्त भट्टराईले भने–‘ उहाँको खोजतलासमा प्रहरी प्रशासनबाट ढिलाई भयो, वुवा आमा रातै दिन रोएर वेहाल छ , उहाँहरुको मन बुझाउनका लागि हेराउने मान्छे एउटा खाली गरेका छैनौं , कसैले तिन दिनमा आाई पुग्छन भने , कसैले पाँच दिनमा भने कसैले सात दिन भने तर आज ९ दिन पुग्दा पनि दाजु नभेटिए पछि पण्डित बोलाएर घरमा ग्रहदशा कटाईदै छ । उनले थपे–‘ यसरी ग्रहदशा कटाए पछि दाजु भेटिनु हुन्छ भनेका छन् पण्डितले हेरौं कस्तो हुन्छ ।’
आज यतिका दिन वित्दा पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीले खोजतलास र अनुसन्धान फितलो गराएको उनका दाजु रेणुकान्त भट्टराईले गुनासो गरे । ‘हामीले खोजतलासका लागि त्यस कार्यालयमा उजुरी दिएको पनि यतिका दिन भई सक्यो’, भट्टराईले भने, ‘ प्रहरीले फेला पार्न नसक्नुले अनुसन्धान फितलो भएको अनुभुत गरेका छौं । ’
यस सम्वन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रमुख डिएसपी एकनारायण कोईरालासंग सम्पर्क राख्दा उनले मातहतका सम्पुर्ण ईकाईका प्रहरीहरु व्यापक रुपमा परिचालित गर्दा पनि फेला पार्न नसकेको प्रतिकृया दिए । उनले उनको कल डिटेलबाट पनि अनुसन्धान भई रहेको बताए ।
यता घरमा छोरा पाउँने आशमा वावु आमाले पण्डित बोलाएर ग्रहदशा कटाउँदै र ईस्वर पुकार्दै छोराको सु–स्वास्थ्यको कामना गर्र्दै आमा वुवा
त्यहाँबाट अलि माथी सम्म हिँडिरहेको उनका छिमेकीले पनि देखेका छन् । त्यस अघि उनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सन्धीखर्कबाट ५० हजार निकालेर उनै सुनारलाई बुझाएका छन् ।
सुनारले उक्त रकम बुझेको र करिव १ वजेतिर घर फर्कियौं भनेर फोन गर्दा स्वीचअफ भएको पाएपछि परिवारजनलाई खवर गरेको बताईएको छ । सुनार घर फर्किएका छन र उनको पसल उनकै छिमेक मैदानमा रहेको छ ।
के भन्नु हुन्थ्यो उहाँले रु भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्–‘तिहारको भाई टिका सम्म नवलपरासी विद्यालयमा जान्न । टिकाको अर्का दिन कार्तिक ५ गते तिमीलाई लिएर जान्छु र उतै बसौंला भन्नु भएको थियो ’उनले थपिन मैले त केहि अनुमान र्नै गर्न सकेकी छैन् ।’
विष्णुल भनिन्–‘एक महिना अघि मात्र उहाँसंग चिनजान भएको थियो , त्यस अघि मैले उहाँलाई देखेको पनि थिईन अँस्ती आफन्तले मागेर विवाह भएको हो । ’ स्नातक सम्म अध्यान गरेकी घिमिरे स्थानिय तहको निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा भर्ति समेत भईकी थिईन् ।
विवाहको दिन वेहुला संग तस्वीर खिचाउँदै
बेपत्ता शिक्षक भट्टराईलाई कुनै विमार नभएको , साथमा पैसा पनि धेरै नभएको र कसै संग दुश्मनी पनि नरहेको उनका दाजुले बताए । परिवारमा आसंकको अर्को पाटो कसैले अपहरण ग¥यो कि रु भन्ने छ ।
जिल्लाका विभिन्न विद्यालय हुँदै पछिल्लो चरण निमावि तह गाणित विषयका स्थाई शिक्षकका रुपमा भट्टराई नवलपरासीको डेढ मावि डेढगाउँमा कार्यरत थिए । उनि त्यस विद्यालयमा पनि नपुगेको विद्यालयले जानकारी दिएको छ ।
बेहुली छोडेर बेपत्ता हुने छोरालाई खोज्न हेरखोर–पुजापाठ, दुलही वियोग पिडाले अचेत (फोटो सहित)
परिवारजनले खोज तलासका लागि सवै सञ्चार माध्यम , प्रहरी प्रशासन र आम नागरिक संग अपिल गरेका छन् । नव दुलही घिमिरे तनाव ग्रस्त हुँदै आज माईती घर पुगेकी छिन् । जिल्लाका विभिन्न विद्यालय हुँदै पछिल्लो चरण निमावि तह गाणित विषयका स्थाई शिक्षकका रुपमा भट्टराई नवलपरासीको डेढ मावि डेढगाउँमा कार्यरत थिए । उनि त्यस विद्यालयमा पनि नपुगेको विद्यालयले जानकारी दिएको छ ।